Sawirada alwaaxda ah ee Hsu Tung Han: pixel waa jilaayaasha | Abuurista khadka tooska ah
Pixel iyo cubic ee farshaxannada alwaax ee Hsu Tung Han
Cubism waa a ereygii dhashay bilowgii qarnigii XNUMXaad taasina waxay khuseysaa nooc ka mid ah rinjiyeynta oo ka kooban xabadaha yaryar. Waxaan haynaa Pablo Picasso weyn oo ah shirkad weyn, laakiin sidoo kale Juan Gris oo ah farshaxan kale oo Isbaanish ah oo soo maray dhaqdhaqaaqan farshaxanimo. Waxyaabaha qosolka leh ayaa ah inay ka muuqan karto waqtiga uu marayo fanaaniinta kale ee raadiya agab kale oo ay ku cabirto.
Hsu Tung Han waa farshaxaniste reer Taiwan ah oo xirfadiisa weyn ay ku xardhan tahay farshaxanno alwaax leh hadiyadda muuqashada sida ku milmay meelaha qaar pixel iyo xabadaha. Waqtigan xaadirka ah ee ciyaaraha fiidiyowga sida Minecraft ay muujiyeen wadada hore ee luuqad naqshadaysan oo cubic iyo pixelated ah, tirooyinka Tung Han ayaa aad u muuqda
Tung Han wuxuu shaqadiisa ku qabtaa nooc alwaax wanaagsan ah cad sida walnut. Sababta ugu weyn, iyo waxa loogu kala geddisan yahay, waa in lagu muujiyo khayaali in jirku, xaaladdan midda quusidda ee xiddigaha madaxa u ah daabacaadda, laga sameeyay pixels laftooda, oo si fiican loogu xardhay alwaax sida xabadaha yaryar.
Waa faahfaahin oo laga helo qayb weyn oo ka mid ah Tung Han alwaax xardhan taasina waa qayb ka mid ah hal-abuurnimada iyo xariifnimada weyn ee uu horumariyo farshaxanyahan reer Taiwan ah.
Mid kasta oo iyaga ka mid ahi wuxuu ina tusayaa xilligaas ay taasi u muuqato waqtigu waa "barafoobay" waana la arki karaa sida qaabka 3D uu asal ahaan uga soo jeedo xabadaha iyo pixels.
Waxaan wajaheynaa fanaan alwaax ah oo leh uu instagram markaa waad raaci kartaa isaga iyo tiisa Bogga Facebook taas oo wuxuu daabacayaa shaqooyinkiisa cusub. Sawir qaade aad u heer sare ah oo alwaax ah oo soo raaca kuwa kale ee soo maray isla xariiqyadan gudaha Creativos Online.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Pixel iyo cubic ee farshaxannada alwaax ee Hsu Tung Han
Soo kabashada PET ee xarumaha Veronika Richterová